Sidee loo Dhajiyaa Instagram? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo dhajiyaa barta Instagram?
Waxaa laga yaabaa 10, 2021 0 comments 586
Marka aad ka tirsan tahay shabakad bulsheed oo leh in ka badan 1.000 milyan oo isticmaale sida Instagram Waxyaabaha macquulka ah ayaa ah inaad rabto inaad ka faa'iideysato dhammaan faa'iidooyinka ay tani ku siin karto si aad u fuliso ganacsiga badeecooyinkaaga iyo adeegyadaada. Waa waxa ugu macquulsan haddii aad rabto inaad ku guuleysato ganacsi ahaan oo aad noqoto ganacsade guuleysta.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ay shabakadani bulshada ku siineyso waa ikhtiyaar u leh Swipe Up ama Swipe UpQalabkan, waxaad ku martiqaadi kartaa kuwa raacsan inay la falgalaan daabacadaha la xiriira iskuxirka ama ficilka aad ugu baaqeysid isdhexgalka.
Marka laga reebo miirayaasha, fiidiyowyada dhaqaaqa iyo kan kale ee faa'iidooyinka ugu badan ee codsigu waa Swipe up, this qalab loo isticmaalo si loo muujiyo farriimaha ama sheekooyinka ka sarreeya isticmaaleyaasha kale waxay noqdeen faa'iido suuq-geyn ah marka ay timaaddo ka soocnaanta dadka kale. Waxa adag in la aamino ayaa ah in uusan qof walba heli karin.
Ayaa isticmaali kara qalabkan:
Haddii aad ka tirsan tahay kooxdaas dooneysa inay adeegsato qalabkan 'Instagram', laakiin aan weli la helin, waan kuu sharxi doonnaa sababta. Waa wax aad u fudud, kani waa aalad loogu talagalay xisaabaadka gaaraya 10.000 raac ama ka badan, taasi waa, haddii aad rabto inaad ka soo dhex baxdo dadka kale, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad muujiso Instagram inaad ka dhex muuqato kuwa raacsan.
Hadaad ka tirsan tahay kooxdaas oo ay iftiimisay adeegsadayaasha in ka badan 10.000 oo raacsan, waxaan sharxeynaa sida loo kiciyo qalabkan.
Waa inaad tagtaa xulashada daabacaadda sheekooyinka una mari dhinaca midig ama riix oo hayso shayga aqoonsanaya kamaradda.
Samee qoraalkaagaAma sawirro ama, haddii taasi ay dhacdo, fiidiyowyo, xusuusnow inaad adeegsan karto wax kasta oo ka mid ah shaqooyinka uu dalabku ku siiyo.
Markii ay dhammaato waxyaabaha la wadaagayo, waa inaad doorataa ikhtiyaarka isku xirka ee aad ka heli doontid dusha sare ee shaashadda barnaamijka, oo ay tahay inaad doorato si loogu muujiyo sheekada aad daabici doontid oo kuwa raacsan ay awood u yeelan doonaan inay doortaan oo ay galaan oo ay toos u galaan sheekadaada.
Qalabkan sidoo kale waxaa loo heli karaa shirkadahaas oo, sida isticmaaleyaasha gaarka loo leeyahay, leeyihiin in ka badan 10.000 oo raacsan. Taas oo siinaysa iyaga inay ka faa'iidaystaan ​​suuq-geynta shirkadaha kale ee ay ku yar yihiin dadka raacsan, kana caawisa inay si fiican isku dhejiyaan suuqa.
Dhinaca kale, xisaabaadka ganacsi ee leh astaamahan ayaa sidoo kale ku dari kara ikhtiyaarka loo yaqaan "U wac ficil", Tani waxay u oggolaaneysaa iyaga inay macaamiishooda ku hagaajiyaan daabacaad gaar ah, iyagoo ka caawinaya inay si fudud u helaan daabacaadda dantooda, dabcan waxay awoodi doonaan inay ku daraan "badhanka iibsiga" sidaa darteed sidan ayay macaamiisha akoonnadani uga dhigi karaan isbarbardhiga iyada oo aan la sii adkeynin. Ilaa iyo inta ay ka soo baxayaan shuruudaha lagama maarmaanka ah si ay ugu qalmaan dheefahaan.
1 Mari kor:
2 Ayaa isticmaali kara qalabkan:
3 Si aad u dhaqaajiso:
4 Adeegga shirkadaha:
Sidee looga saaraa waxyaabaha jecel Twitter?
Sideed uga samaysan kartaa guddi Pinterest?